Champ League Archive - Gool FM - page 5	twitter
Buffon oo ka hadlay kulanka caawa iyo goolhaye Casillas
(Porto) 22 Feb 2017 Goolhayaha kooxda Juventus ee Gianluigi Buffon ayaa ka hadlay kulanka caawa kooxdiisu ay ka hortagi doonto kooxda FC Porto koobka horyaalada yurub.
Kulankaan ayaa ah kii 100-aad ee Gianluigi Buffon uu ka soo muuqdo koobka horyaalada yurub laakiin wuxuu sheegay inuu malaynayay inuu ciyaaray kulamo intaas kabadan.
Buffon ayaa amaanay go’aankii goolhaye Casillas uu uga soo tagay kooxda Real Madrid isla markaana uu ugu soo biiray kooxda reer Portugal ee FC Porto.
“Diyaarada ayaa la iigu dhex sheegay in kulankaan uu 
(England) 22 Feb 2017. Man City ayaa xalay ciyaar waali ahayd 5-3 ku martay kooxda Monaco oo runtii wacdaro wayn ka dhigtay gegada Etihad.
Flop-kii hore ee Premier League Radamel Falcao ayaa markale taageerayaasha dib isku baray isagoona ka xareeyay Man City labo gool oo caaqibo leh inkastuu rigoore ka khasaariyay kooxdiisa.
Haddaba daawo goolasha kulankan cajiibka ahaa:
“Dhaleeceyn baa kow nalooga siin doonaa haddii aan guul darreysano kulanka caawa.” Pep Guardiola
(Manchester) 21 Feb 2017. Pep Guardiola ayaa sheegay in dhaleeceyn kow looga siin doono isaga iyo kooxdiisa Man City haddii ay ku guul darreystaan kulanka caawa ay Champions League ku wajihi doonaan kooxda ugu weerarka shidan Yurub xagaagan ee Monaco.
“Dhammaan Yurub way na daawan doonaan, kulankeena ayay falan-qeyn doonaan, dhaleeceyn ayayna kow inooga siin doonaan haddii aan guuleysan wayno, ama waxay ka hadli doonaan sidii aan u wacnaan haddii aan guuleysano,” Guardiola ayaa sidaa yiri ka hor kulanka caawa ay 
Ancelotti oo rajo ka muujiyay in Jerome Boateng uu taam u noqon karo kulanka lugta labaad ee Arsenal
(Munich) 04 Feb 2017 Tababaraha kooxda Bayern Munich ee Carlo Ancelotti ayaa ka hadlay xaalada dhaawac ee daaficiisa Jerome Boateng.
Ancelotti ayaa farxad ka muujiyay xaalada Jerome Boateng, wuxuuna sheegay in laacibka reer Jarmal uu beegsanayo sidii uu taam u noqon lahaa waqtiga ugu dhaqsiyaha badan.
Tababaraha reer talyaani ayaa rajo ka muujiyay in Jerome Boateng uu tababarka dib ugu soo laaban karo dhamaadka bishaan taas oo ka dhigan inuu taam u noqon karo kulanka lugta labaad ee Arsenal ay u safrayaan.
“Daganaan badan ayaan ka dareemaynaa 
“Saamayn ma yeelan doonto nasashada aan helnay ka hor kulanka Arsenal” – Mats Hummels
(Munich) 10 Jan 2017 Daafaca kooxda Bayern Munich ee Mats Hummels ayaa ka hadlay nasiinada kooxdiisu ay heshay ka hor kulanka Champions League ee Arsenal.
Bayern Munich ayaa la ciyaari doonta Arsenal wareega 16-ka ee Champions League xili kooxdu ay heshay nasiino ka badan kooxda reer ingiriis.
Kooxda reer Jarmal ayaa ciyaari doonta kaliya 3 kulan oo rasmi ah ka hor kulankooda lugta hore ee Arsenal, halka kooxda reer ingiriis aysan helin nasiino fiican.
“Waxaan rumaysanahay in nasiinadu aysan saamayn ku yeelan doonin labada kooxood 
“Inter kama rajo dhigin u soo bixida Champions League” – Joao Mario
(Milan) 04 Jan 2017 Laacibka qadka dhexe ee kooxda Inter Milan Joao Mario ayaa sheegay in kooxdiisu aysan ka rajo dhigin u soo bixida Champions League ee xiliciyaareed kan.
Inter ayaa haatan 5 dhibic u jirta booska loogu soo baxo koobka horyaalada yurub, waxayna ku bilowdeen xiliciyaareed kan qaab liita.
Joao Mario ayaase aaminsan in kooxdiisu ay u soo bixi karto Champions League, wuxuuna cadeeyay in hamiga Inter uu yahay sidii kooxdu ay uga soo muuqan lahayd koobka horyaalada yurub xiliciyaareedka dambe.
“Xisaab ahaan wax 
“Waan ka soo bixi karnaa Barcelona” – Unai Emery
(Paris) 13 Dis 2016 Tababaraha kooxda PSG ee Unai Emery ayaa ka hadlay isku aadka wareega 16-ka ee kooxdiisu ay ku dhacday dhigeeda Barcelona.
Unai Emery ayaa aaminsan in kooxdiisu ay fursad fiican u haysato inay ka soo baxdo Barcelona oo haatan ah kooxda loo saadaalinayo inay soo gudbayso.
45 jirkaan reer Spain ayaa sheegay inuu sifiican u garanayo Barcelona, wuxuuna intaa ku daray inuu ku qanacsanyahay qaabkii loo sameeyay isku aadka.
“Dhamaan kooxaha jooga heerkaan waa kuwo fiican, aniga iyo caawiyayaasheyda PSG sifiican ayaan 
AQRISO: Sheeko gaaban oo dhex martay Ozil iyo Boateng kaddib markii la isku aadiyay Arsenal iyo Bayern Munich Champions League
(Europe) 12 Dis 2016. Mesut Ozil ayaa ku kaftamay saaxiibkii Jerome Boateng oo ay ka wada tirsan yihiin xulka qaranka Jarmalka kaddib markii la isku aadiyay kooxaha Arsenal iyo Bayern Munich wareega 16-ka Champions League oo la sameeyay goor dhaweyd isku aadkiisa.
Afar jeer ayaa la isku beegay labadan kooxood 5-sano gudahood, waxa uuna Ozil u sheegay saaxiibkii Boateng in Bayern ay markaan awoodi doonin inay ciyaartooy dhigato marka ay Arsenal la ciyaareyso maadaama lagu dhagan yahay horyaalka Bundesliga.
Bayern Munich ayaan 
DEG DEG: Isku aadka wareega 16-ka ee Champions League oo la sameeyay (Yaa isku aaday)
(Nyon) 12 Dis 2016 Xiriirka kubadda cagta yurub ee UEFA ayaa si rasmi ah u sameeyay isku aadka wareega 16-ka ee koobka horyaalada yurub.
Kulamo adag ayaa ka soo baxay isku aadka, waxaana isku aaday Bayern Munich iyo Arsenal, PSG iyo Barcelona, Arsenal ayaana sanadkii 2-aad oo xiriir ah ku aadaysa koox wayn.
Real Madrid ayaa la ciyaari doonta Napoli, halka Man City ay isku dheceen kooxda reer France ee Monaco, Juventus ayaa ku aaday FC Porto.
– Manchester City vs 
Isku aadka wareega 16-ka Champions League oo maanta la sameynayo…(Halkan ka aqriso wax kasta oo aad uga baahan tahay)
(Europe) 12 Dis 2016. Maanta duhuradii ayaa la sameyn doonaa isku aadka wareega 16-ka Champions League, haddaba waxaan halkan kugu heynaa macluumaad badan oo aad u baahan tahay ka hor isku aadka.
Kooxaha soo baxay ayaa kala ah:
Kuwa kaalinta koowaad kaga soo aflaxay garoup-yadooda.
Kuwa kaalinta labaad ku soo baxay:
Yay kooxdaad taageerto ku beegmi kartaa wareega 16-ka Champions League?:
ARSENAL | Koowaad ayay uga soo baxday Group A (14 Dhicood) | Waxay ku beegmi kartaa: Benfica, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Porto & 